Iyo Khronos OpenXR: Nyowani API yeVR uye AR | Linux Vakapindwa muropa
Kronos Boka Mubatanidzwa watinoziva kwazvo, sezvo iri iyo iri kumashure kwemaAPI senge OpenCL, OpenGL, Vulkan, nezvimwe. Ivo vachangobva kuzivisa chitsva chitsva che OpenXR, izvo zvakasiyana neOpenGL neVulkan, ayo ari graphical APIs, kana OpenCL inova yehurongwa hwakakura hwakawanda seGPGPUs, ikozvino inotarisira kumisikidza chitsva chinobatanidza VR neAR (inonzi XR).
Collabora, rimwe zita rinonzwika rakajairika kwauri kana iwe waverenga iyi blog nguva dzose, yakazivisawo Yakanaka, yakakwana uye yakavhurwa sosi yekumhanyisa nguva yeOpenXR yeLinux. Saka nhau dzakanaka kune vanogadzira zverudzi urwu rwechokwadi chakawedzerwa uye chaicho chaicho, uye nekuunza mamwe mapurojekiti emidziyo mune ino chikamu kuLinux. Nhau huru kune vadikani venyika ino uye yakavhurika sosi, avo vane izvi zvirongwa vari kukurudzira kushandiswa kweyakavhurika matanho eXR.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti OpenXR parizvino ine kuburitswa kwechinguvana mushanduro 0.90, nekudaro chirongwa chiri muchikamu chekutanga ... Asi ndine chokwadi chekuti ichabudirira neimwe nguva. Muchokwadi, iri kutowana rutsigiro uye vateveri mukati mekambani yehardware. vanogadzira mitambo yemavhidhiyo uye zvimwe zvigadzirwa zvehardware, seEpic Games, Microsoft, Oculus, HTC, Tobii, Kubatana, uye nezvimwe. Saka nemakambani eiyo caliber, haina kutaridzika yakaipa ...
Kana ari Monado anobva kuCollabora, achiti iyo nguva yekumhanyisa yeLinux uye kuti inoshandisa OpenXR inovimbisawo zvakawanda. Muchokwadi, inopfuura nguva yekumhanya, inoenderera mberi uye ine chinangwa chekuvaka yakakwana ecosystem iyo inosanganisira XR uye inoitirwa vanofarira kana yakavhurika sosi programmers, vatengesi vehardware kana vatambi. Kana iri yekutsigirwa kwemahara, zvinoita sekunge inoshandisa mapurojekiti senge OpenHMD uye libsurvive nezvazvo…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Khronos OpenXR: API nyowani yeVR neAR
Vivaldi 2.4 inosvika kuzovandudza bharaki rebasa
Linux Kernel Mentorship: Nyowani Linux Foundation Platform